ktmkhabar.com - देउवाले गगन थापालाई किन ल्याएनन् स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, किन रोजे व्यापारी ?
काठमाडौँ – स्वास्थ्य संकटमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री नहुनु देशको दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रीसहित सपथ खानपर्नेमा उनले अरु मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर सपथ खाए, खुवाए ।
कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरले आक्रान्त जनताको मनमस्तिष्कमा खोप कहिले आउला भन्ने छ तर खोप ल्याउनृ मन्त्रालय मन्त्रीविहन भएपछि जनतामा निरासा छ । यद्यपी देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै असोजभित्र एक तिहाई र यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ती गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि देउवाले आइतबार उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल राज्यमन्त्री श्रेष्ठबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने संकेत गरेको एक नेता बताउँछन् । देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अब राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रालय चलाउने र खोप लगायतको उपलब्धता हेर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो संकेत होइन ।’ जबकी संस्थापन समूहका नेताहरुका अनुसार गगन थापालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दा पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा धेरै नकारात्मक थिएनन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुका साथै कोभिड महामारीकालमा रचनात्मक भूमिका खेलेका थिए ।
तर पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहलाई पनि मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले उनी गगनको नाम त्यताबाटै आओस् भन्ने चाहन्थे । तर सिटौला समूहबाट गगन होइन, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीको नाम आयो । देउवाले उनलाई स्वास्थ्यमा लैजाने आँट गरेनन् । कोरोना खोप अभियान सफल हुँदा पाउने राजनीतिक लाभमा दाबी नगर्ने र मन्त्रालय पनि चलाउन सक्ने पात्रको खोजी गर्दा श्रेष्ठलाई छनोट गरेको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । जबकी श्रेष्ठको दाबी शिक्षामा थियो । एक नेता भन्छन्, ‘खोप म्यानेज गरिहाल्छु, अब्बल व्यवस्थापकलाई लगेँ भने खोप अभियान सफल हुँदा उनले राजनीतिक लाभ खोज्दैनन् भन्न लागेको होला ।’
तर देउवाको निर्णय सरकारका लागि मात्र होइन, कांग्रेसकै लागि घातक बन्न सक्नेछ । किनकी असोजभित्र एक तिहाई जनसंख्यालाई खोप दिने लक्ष्य आफैंमा महत्वकांक्षी छ । अहिलेसम्म नेपालमा ७३ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप आपूर्ति भएको छ । थप ५० लाख डोज खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित छ ।
जबकी प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एक तिहाई नागरिकलाई दुबै जोड लगाउन १ करोड ४४ लाख ६६ हजार ६६६ डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात २० लाखभन्दा बढी खोप अझै अपुग छ । बाँकी नागरिकका लागि चाहिने खोपको अहिलेसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि खोप उत्पादक कम्पनीले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ फर्काएको छैन ।’
व्यवस्थापन क्षमताका दृष्टिकोणले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शंकाको लाभ दिन सकिने कतिपयको धारणा छ । तर पूर्व मन्त्रीहरुको अनुभवमा सबभन्दा अपजस पाइने र गाह्रो मन्त्रालय हो स्वास्थ्य । डाक्टरहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिक कला देखाउनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तासँग कहिल्यै डिल नगरेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई कसरी डिल गर्छन् ? त्यो भने भोलिका दिनमा देखिनेछ ।-माेटिभेट न्युजबाट